के पढ्ने विचारमा हुनुहुन्छ ? बेरोजगार हुँदैछन् रे यस्तो जागिर गर्नेहरू ! – Everest Dainik
के पढ्ने विचारमा हुनुहुन्छ ? बेरोजगार हुँदैछन् रे यस्तो जागिर गर्नेहरू !
आजभोली युवाहरूले त्यस्तो विषयको पढाइ रोज्ने गर्छन् जसले उनीहरूलाई सजिलै जागिर दिलाओस। त्यसैले सहर बजारतिर शिक्षा समेत व्यापारको विषय बनिसकेको छ। तर पनि सधैँ एकनासकै काम गर्दा जसलाई पनि दिक्क लाग्न सक्छ र यसले त्यस्ता कामप्रतिको रोमाञ्च समाप्त हुने खतरा रहन्छ। यस्तो भएको खण्डमा कुनै पनि कामदारले त्यस्तो कामाई मन लगाएर गर्दैन र परिणामस्वरूप समग्र कार्यप्रणालीको कार्यक्षमता नै प्रभावित हुने गर्दछ ।
एकैनासको का या सधैँ सधैँ उस्तै उस्तै प्रक्रिया दोहोऱ्याउने कामले कामदारलाई दिक्क लाग्नु त एउटा पाटो भयो तर यसको अर्को पाटो भने झनै खतरनाक रहेको छ । र, यदि प्रसिद्ध लेखक तथा वित्त व्यवस्थापक जोन पुइयानोलाई पत्याउने हो भने यस्ता जागिरहरूको हकमा कामदार बेरोजगार बन्ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
पुइयानो भन्छन् एकैनासको काम गर्ने या सजिलै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको काम गर्न सक्ने खालको काम गर्ने मानिसहरूले जागिर गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । उनी भन्छन् आउने पाँचदेखि दश वर्षभित्रमा गणितीय गणक (म्याथम्याटिकल एल्गोरिदम)को मद्दतले त्यस्ता खालका काम गर्न सम्भव हुनेछ । पुइयानो भन्छन्, “कमसेकम विकसित देशहरूमा त यस्तो हुन बेर लाग्ने छैन ।”
पुइयानोले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै ‘द रोबोट्स अर कमिङ- अ ह्युमन सर्भाइभल गाइड टु प्रोफिटिङ इन द एज अफ अटोमेसन’ शीर्षकको पुस्तक समेत लेखका छन् ।
उक्त पुस्तकमा पुइयानोले केही यस्ता कामहरूको सूची बनाएका छन् जो केही दिनमा गणितीय गणकका माध्यमले गरिने छन् र अचम्मको कुरा के छ भने य्तास्मा चिकित्सक र अधिवक्ता जस्ता अन्यन्त प्रतिष्ठित पेसा अमेत सम्मिलित छन् ।
पुइयानोले बिबिसी स्पेनिस सेवालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा चिकित्सा र वकालत जस्ता सेवा भविष्यमा लोप नभएपनि त्यसमा प्रयोग हुने श्रमको मात्रा भने निकै कम हुने बताएका थिए । यस्ता जागिर गर्नेहरू मध्ये अधिकांश जागिर गुम्ने भएपनि प्रविधिलाई संचालनको आदेश दिने जस्ता कामहरू भने मानिसले नै गर्ने बताइएको छ । उनका अनुसार निम्नानुसारका जागिरमा रहेकाहरू प्रविधिका कारण बेरोजगार हुन सक्नेछन्:
धेरैले डाक्टरको पेसालाई धेरै सुरक्षित मान्ने गरेका छन् । मानिसको औसत आयु बढ्दै गैरखेकाले भविष्यमा चिकित्सा क्षेत्रमा निकै ठुलो जनशक्तिको आवश्यकता पर्न सक्छ तर पुइयानो भन्छन् भविष्यमा रोग जाँच गर्ने काममा चिकित्सकहरूको सीमित भ=उमिका रहन सक्छ । यस्ता काम स्वचालित मेसिनहरूले गर्ने उनको मत रहेको छ । यसले गर्दा धेरै डाक्टरहरू बेरोजगार हुन सक्नेछन् । तर इमर्जेन्सी वार्ड लगयतका विभागहरूमा ब्न्हाने डाक्टरहरू तथा सहायक चिकित्साकर्मीहरूको आवश्यकता रहिराख्नेछ ।
पुइयानो भन्छन् भविष्यमा दस्तावेजहरू बारे काम गर्न अहिले भन्दा कम वकीलहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ । उनी भन्छन् थोरै अनुभव र धेरै कागजी काम गर्नु पर्ने वकालत सम्बन्धी काम भविष्यमा कम्प्युटर सफ्टवेयरले गर्ने छन् ।
आजभोली नै घर तथा अन्य संरचनाहरू डिजाइन गर्न सक्षम सफ्टवेयरहरू निर्माण भइसकेका छन् । भविष्यमा यस क्षेत्रमा अझ बढी प्रविधिको र थोरै मात्र जनशक्तिको प्रयोग हुने पुइयानोको मत रहेको छ ।
पुइयानो भन्छन् भविष्यमा कर सम्बन्धी सामान्य काम गर्न सफ्टवेयर उपलब्ध हुने र यसका लागि लेखापालहरूको आवश्यकता हुने छैन । ठुला र गम्भीर प्रकृतिका निर्णय लिनुपर्ने खालका लेखापालनका काम बाहेक सबै काम गर्न सफ्टवेयर उपलब्ध हुनेछन् ।
५. फाइटर विमान चालक
अचेल जोखिमयुक्त ठाउँमा ड्रोनले काम लिने गरिन थालेकोछ । पुइयानो भन्छन् भविष्यमा यस्तो अझ बढी हुने र त्यस्तो अवस्थामा फाइटर प्लेनका पाइलटहरूको जागिर गुम्ने छ ।
६. प्रहरी र गुप्तचर
पुइयानोका अनुसार अब सामान्य बौद्धिकता आवश्यक पर्ने धेरै जसो आपराधिक अनुसन्धानहरू सफ्टवेयरले नै गर्नेछन् । प्रविधिको मध्यमबाट गुप्तचरीका काम पनि गर्नसकिने भएकाले त्यससम्बन्धित काम गर्ने जनशक्ति पनि भविष्यमा थोरै मात्र चाहिने पुइयानो बताउँछन् ।
पुइयानो भन्छन्. “भविष्यमा प्रहरीसेवामा कार्यरतहरूले जागिर त गुम्ने छैन तर यसमा थोरैमात्र मानिस भए पुग्नेछ ।”
७. घरजग्गा एजेन्ट
अहिले नै घरजग्गाको व्यापारमा अनलाइन सेवाले मानिसको संलग्नतालाई धेरै कम गरिदिएको छ । पुइयानोको कुरा मान्ने हो भने भविष्यमा यस क्षेत्रका सबै जसो कामहरू अनलाइन प्लेटफर्मका माध्यमबाट हुनेछन् र यस क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरूको जागिर गुम्नेछ ।
कुरा यति मात्र होइन…
उनी भन्छन् प्रविधिले बिचौलियाको काम गर्नेहरूलाई बढी पिरोल्नेछ तर ठुल्ठुला कम्पनीहरू भने थोरै लगानीबाट ठुल्ठुला काम गर्न सकिने भएकाले अझ धनी हुनेछन् ।
प्रविधिका कारण जागिर गुम्ने मात्रै होइन केही नयाँ क्षेत्रमा जागिरका नयाँ अवसर समेत खुल्ने छन् । उनका अनुसार भविष्य आज हामीले कल्पना नै नगरेका क्षेत्रमा नयाँ अवसर खुल्नेछन् र सम्भवतः सुरुमा त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि मागेको पारिश्रमिक दिने गरेर अवसर सिर्जना हुनेछन् ।
पुइयानोका अनुसार भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सिस्टम), सफ्टवेयर निर्माण र एल्गोरिद्म डेभलपमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा अवसरहरूको बाढी हुनेछ ।
यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकारका स्वचालित प्रणाली मर्मत गर्नसक्ने कुशल इन्जिनियरका लागि समेत अवसरका ढोकाहरू खुला रहनेछन् ।
पुइयानो भन्छन् केही सामान्य काम जस्तै पानीको धारा मर्मत गर्ने प्लम्बर, विद्युत लाइन मर्मत गर्ने मानिस र निर्माण जस्ता क्षेत्रमा कामका अवसर रहिरखने छन् । बीबीसी
ट्याग्स: John Pugliano, Who are loosing their job in future
मेक्सिकोका राष्ट्रपतिले आफू चढ्ने विमान बेच्दै
किसानको उन्नति बिना देशको विकास हुन सक्दैनः मन्त्री अर्याल